Dowladda Somalia oo Ka Codsatay Maraykanka inay kordhiyaan Duqaymaha ay ka gaystaan Somalia. – Hornafrik Media Network
Dowladda Somalia oo Ka Codsatay Maraykanka inay kordhiyaan Duqaymaha ay ka gaystaan Somalia.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa ka dalbaday dowladda Mareykanka taageero badan iyo in la kordhiyo weerarada cirka ah ee ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Drones.
Wasiiru dowlaha Gaashaandhigga oo la hadlayay Wargeyska The Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa sheegay in taageero la’aan aan la jebin karin Argagixisada
Mr Xagaa ayaa sheegay in taageerada Mareykanka uu saameyn doono ama jebin doono dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, isagoo xusay in weerarada cirka ee ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay qeyb ka yihiin Howlgaladda waxtarka leh ee lagula dagaalamayo Cadowga Alshabaab.
“Haddii aanan heysan taageerada Mareykanka, cagahayaga kuma istaagi karno, Qeybta Amniga Soomaaliya wali ma habeysna, waxaan u baahanahay weeraro badan oo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, sababtoo ah diyaaradaha ayaa beegsan kara madaxa Maska”ayuu yiri Maxamed Cali Xagaa.
Mareykanka ayaa sanadkan kordhiyay weerarada cirka ah ee uu ka fuliyo Soomaaliya, waxaana sanadkan dhacay illaa 30meeyo weeraro cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday Kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
Janaraal Mukhtaar “Booliska kuma darno Shabaabka Dowladda isu soo dhiiba”.
Faah Faahin Al-Shabaab Oo Weeraray Degmada Mahadaay